I-Pocophone F1 iya kuphehlelelwa eSpain nge-30 ka-Agasti | I-Androidsis
Ngale ntsasa ukumiliselwa kwePocophone F1 okanye iPOCO F1 kwiimarike ezintsha ezininzi kuqinisekisiwe, kubandakanya intengiso yayo yokuqala eYurophu. Akunyanzelekanga ukuba silinde ixesha elide de ukumiliselwa kwesixhobo kwenye intengiso eYurophu. Kule meko, ilizwe elikhethiweyo yiSpain. Ifowuni yokuqala yohlobo lweXiaomi ifika eSpain.
Ukuqaliswa kwale fowuni eYurophu kubhengezwe ngokusesikweni namhlanje, kubandakanya nomhla wokumiliselwa kwayo eSpain. Kwaye abo banomdla kule Pocophone F1 ngekhe balinde ixesha elide ukufumana esi siphelo siphezulu.
Kungenxa yokuba kumnyhadala wokubonisa owenziwe yifemu, umhla wokumiliselwa kweSpain uqinisekisiwe. Lo mhla wokukhutshwa uya kuba ngu-Agasti 30. Ke kule veki ungasele uyithengile le POCO iphakamileyo ngokusemthethweni eSpain.
Kwakhona, I-Pocophone F1 iza kuphehlelelwa kwiindawo eziqhelekileyo zeXiaomi. Into oza kuyenza ngayo e-El Corte Inglés, Fnac, Media Markt, Carrefour, Amazon, Worten okanye kwiNdlu yeFowuni, phakathi kwabanye. Ke kuya kuba lula kakhulu ukuthenga esi siphelo siphezulu.
Sifumana iinguqulelo ezimbini zale Pocophone F1, eya kuba nexabiso ngalinye. Nangona amaxabiso abo esezantsi kakhulu kunoko sikubonayo kwisiphelo esiphakamileyo namhlanje. Ke yonke into ibonisa ukuba baya kuba yimpumelelo kwintengiso eSpain. La ngamaxabiso ezi nguqulelo zimbini:
I-Pocophone F1 ene-6/64 GB: ii-euro ezingama-329
I-Pocophone F1 ene-6/128 GB: ii-euro ezingama-399
Ngaphandle kwamathandabuzo, ixabiso elifikelelekayo kule fowuni yokuqala kwi-brand Xiaomi entsha. Ngeentsuku ezintathu sinokuyithenga ngokusemthethweni. Kuhlala kubonakala ukuba abathengi bayifumana njani.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » I-POCO F1 isungulwe eSpain: Ixabiso kunye nokufumaneka
I-PowerPoint, i-Excel kunye ne-OneDrive idlula ukhuphelo lwezigidi ezingama-500 kwiVenkile yokudlala